Kutheni ufuna ukudala i-backlink ephezulu ye-PR kwisayithi lakho?
Into ebaluleke kakhulu ekuqhubeni injini yokutshitshiswa ngokungathandabuzekiyo idibanisa isakhiwo. Iinjongo zophando zisebenzisa i-backlink njengezikhundla zokubeka kwiziko lewebhu. I-backlinks eziphezulu zezinga eliphezulu zikhomba kwindawo yakho, amathuba amaninzi ukubeka phezulu kwi-SERP oyifumanayo. Ukulandela i-backlinks kwenza kube lula kwiGoogle ukuchonga igunya lephepha lewebhu kunye nesigaba sayo. Yingakho ukuphucula indawo yakho kwindawo kwindawo yokukhangela kunye nokutsala i-traffic target target; kufuneka ugxininiswe kwi-backlinks ephezulu ye-PR.
Eli nqaku elifutshane lenzelwe ukukubonisa indlela yokufumana i-backlink ephezulu ye-PR kwisayithi lakho. Kodwa okokuqala, ndivumele ndikuchazele ukuba yiziphi iindawo ezilandelelanayo.
Yenza i-backlinks kunye nendima yabo kwisizukulwana sezithuthi
Ukulandela i-backlinks zangaphandle zivela kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ezibonisa umthombo wakho wewebhu. Ezi ziqhagamshelana nazo ziyaziwa njengezixhumanisi ezingenayo okanye zangaphandle. Ezi ziqhagamshelwano zivumela ukudlulisa ijusi yekhonkco ukusuka komnye umthombo ukuya kwenye. Xa i-Google bots iyakhweba isayithi lakho, ayibhekiseli kuphela kwii-ons info kodwa nakwiimpawu ezingekho phantsi ezifana nezixhumanisi zangaphandle. Ukuba ezi ziqhagamshelwano ziyazithobela, khangela i-bots iya kubala ijusi yokuxhuma evela kubo. I-backlink ye-PR ephakamileyo ye-PR izakuba nefuthe elibi endleleni yeenjini zokukhangela zibone indawo yakho.
Yingakho xa ufuna ukudala izixhumanisi zakho, kulungile ukugxininisa imizamo yakho yokwakha ikhonkco kwimithombo evumela ukuba ukhethe ukwenza-landela izixhumanisi. Ngenxa yoko, ezi ziqhagamshelaniso eziphezulu, izikhokelo ezigunyazisiweyo ziya kuphucula isigaba sekhasi lakho kwaye ziphakamise igunya lakho.
Ziziphi iindlela zokufumana ama-backlink aphezulu?
Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokufumana iindlela zokufumana iifayile ezilandelayo kwiiblogi yakho. Nangona kunjalo, kufuneka sijolise kuphela kwi-backlinks eziphezulu ze-PR. Ukuzifumana akulula kakhulu njengoko ucinga. Ngoko ke makhe sixoxe ngokubanzi malunga nendlela kunye nokufumana phi i-backfink backlinks.
Ukufumana i-backlinks esemgangathweni kunye ne-organic, kufuneka uthathe inxaxheba kwiingxoxo zeforum. Kufuneka ube ngumsebenzisi osebenzayo ochaphazelekayo kwiifom zenu kunye nokushiya amacebiso anobulumko, anengqiqo kunye nengqiqo phantsi komxholo ngamnye wengxoxo entsha. Nangona kunjalo, ungahlali uzama ukuba ngowokuqala kwingxoxo ukuba ungakhangeli ukukhankanya umphathi. IiForam zindawo enkulu yokukhuthaza ibhizinisi lakho, ukudala oonxibelelwano abatsha kunye nokwandisa idumela lakho. Ekuqaleni, kufuneka ubeke izimvo okungenani izihloko ezisibhozo ngaphandle kokungeza i-backlinks yakho, kwaye uze uqale ukwakhiwa kokukhuthazwa kwendalo. Nangona kunjalo, akufanele ube ngumntu oqhubekayo kwaye onokunyaniseka.
Unokukhuthaza ibhizinisi lakho ngokufikelela kwezinye iiblogi ezinxulumeneyo kunye nokuvumela ukuba bahlaziye iimveliso okanye iinkonzo zakho. Ngoko, okokuqala, kufuneka ufumane iiblogi ezifanelekileyo ukudala izikhonkco ezifanelekileyo ezikujolise kuyo. I-Pitch kuphela iimveliso ezifanelekileyo kwiiblogi. Ngaphandle koko, usengozini ukuhlakulela ingcinga engafanelekanga yoshishino lwakho. Emva koko fumana indlela yokuqhagamshelana nababloki. Njengomthetho, indawo yabo yoqhagamshelwano kwintloko yeblogi yabo. Ungabhala i-imeyile okanye udibanise naye kwi-LinkedIn. Ukuba ufumana impendulo efanelekileyo, ke lixesha lokumisa iimveliso zakho. Kufuneka ukhethe iimveliso eziphambili kufuneka udale imbonakalo efanelekileyo yekhredithi yakho Source .